प्रदेश २ सरकारमा सहभागि भएको कांग्रेसको तीन गल्ती ! – खोज केन्द्र
» खोज रिपोर्ट » प्रदेश » राजनीति » समाचार अंक: 7635
प्रदेश २ सरकारमा सहभागि भएको कांग्रेसको तीन गल्ती !
अगामि निर्वाचनमा समेत असर पुर्याउने सम्भावना
खोज केन्द्र शुक्रबार, जेठ २८, २०७८ मा प्रकाशित
प्रदेस नम्बर २ मा सरकारको नेतृत्व गरिरहेको जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) ले जनअपेक्षा पूरा गर्न नसकिरहेको बेला प्रदेश सरकारमा कांग्रेस सहभागि हुँदा अगामि निर्वाचनमा समेत कांग्रेसलाई क्षति पुर्याउने सम्भावना देखिएको छ ।
कांग्रेसका प्रदेस सभा सदस्य रामसरोज यादवको नेतृत्वमा सहभागि भएका कांग्रेसले जान अन्जानमा मूलत: तिन गल्ती भएको जानकारहरुको तर्कछ । मधेस केन्द्रित राजनीतिक दल जसपा बीचको विवाद र गुटउपगुटका कारण प्रदेस २ का भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री जितेन्द्र सोनल सहित ४ मन्त्रीहरु मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतले हटाएपछि कांग्रेस सरकारमा सहभागि भएको हो । यद्यपी, कांग्रेसले आप्mनो चुनावी एजेन्डालाई थातिं राखि सरकारमा सहभागि हुँदा प्रदेस २ मा कांग्रेस प्रति टिकाटिप्पणी सुरु भएको छ ।
तीन वर्ष अघि भएको प्रदेस सभा निर्वाचनमा प्रदेश २ को आठ जिल्लामा १ सय ७ सभा सदस्य संख्या रहेकोमा उपेन्द्र यादव नेतृत्वको समाजवादी पार्टीबाट ३०, तत्कालिन राजपाबाट २५, एमाले २१, कांग्रेस १९, माओवादी केन्द्रबाट ११ र संघिय समाजवादीबाट १ प्रदेश सभा सदस्य थियो ।
त्यसमध्ये ४ सदस्य कारवाहीमा परेरका थिए । एक सदस्य मनोनय भएपनि बाँकी ३ खाली नै रहेको छ ।
गल्ती नम्बर १
राजनीतिक दलहरुले प्रदेस नम्बर २ को नाम र राजधानीको प्रस्ताव प्रदेस सभामा दर्ता गराउँदा नेपाली कांग्रेसको पक्षबाट प्रदेसको नाम मिथिला भोजपुरा र राजधानी जनकपुर हुनु पर्ने अडान लिएका थिए । जबकी मुख्यमन्त्री राउतको दलले प्रदेस २ को नाम मधेस र राजधानी जनकपुर क्षेत्र प्रस्ताव दर्ता गराएका थिए । पहिलो पटकको प्रयासमा उक्त प्रस्तावहरु दुई तिहाई बहुमत पुर्याउन नसक्दा विफल भएका थिए ।
पछिल्लो पटक समेत कांग्रेसले उक्त प्रस्ताव नै दोह्रयाएको छ । तर कांग्रेसका नेताहरु मैथिलि र मिथिला प्रति भाषणमा जति ईमान्दारिता देखाएपनि ब्यवहारमा भने त्यस्तो देखिएन । जसको पछिल्लो उद्दाहरण हो प्रदेस २ सरकारमा सहभागि भएका कांग्रेसी मन्त्रीहरुको सपथ ग्रहण समारोह ।
कांग्रेसबाट सहभागि तीनै जना मन्त्रीले आ–आप्mनो मातृभाषालाई वेवास्ता गर्दै नेपाली भाषामा शपथ लिए । जसको कडा आलोचना जनस्तरबाट भईरहेको छ । यो कांग्रेसको ठूलो गल्तीहो ।
गल्ती नम्बर २
प्रदेस सरकार गठन भएदेखि नै मन्त्रीहरुले प्रदेस भित्र प्रत्येक क्षेत्रमा महिलालाई ५० प्रतिशत आरक्षण दिने भाषण ठोक्दैआएका छन् । जबकी प्रदेस २ को मन्त्री परिषद्मै महिला सहभागिता ज्यादै न्यून रहेको छ । प्रदेस सरकारमा महिला सहभागिताको नाममा जसपाले उषा यादवलाई राज्यमन्त्रीको जिम्मा दिएको छ । जसपा बीचको विवादका कारण भौतिक पूर्वाधार विकास राज्यमन्त्री डिम्पल झा हटाईएको हो । उक्त मन्त्रालय हाल कांग्रेसको पोल्टामा परेको छ ।
कांग्रेसका संसदिय दलका नेता समेत रहेका भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री रामसरोज यादव स्वयंले यो मन्त्रालय सम्हालेका छन् । महिला तथा बालबालिका मन्त्रालयको जिम्मा महिला सशक्तिकरणको नारा घन्काउने कांग्रेसले विरेन्द्र सिंहलाई दिएको छ । महिला मन्त्रालय पनि पुरुषको पोल्टामा पर्दा महिला अधिकारकर्मीहरु समेत कांग्रेस प्रति रुष्टछ ।
सिंचाई मन्त्री समेत कांग्रेसले नै पाएको हो । यसको जिम्मा ओमप्रकाश शर्मालाई दिईएको छ । यसरी हेर्दा कांग्रेस महिला प्रति अनुदार रहेको देखिन्छ । यो कांग्रेसको दोस्रो गल्ती हो ।
गल्ती नम्बर ३
पंचायतकाल देखि राजनीतिमा लागेका रामसरोज यादवको अगाडि मुख्यमन्त्री लालबाबु राउत राजनीतिक हाईटमा कम देखिन्छ । राउत २०६२/६३ को आन्दोलनबाट उदय भएका हुन् । त्यसैले रामसरोज स्वयं सरकारमा सहभागि हुदाँ मुख्यमन्त्रीमा आउनु पर्थियो वा कांग्रेसकै अन्य साँसदबाट सहभागि गराउनु पर्थियो । तर रामसरोज यादव स्वयं आप्mनै नेतृत्वमा प्रदेस सरकारमा सहभागि हुँदा राजनीतिक विज्ञहरु उनको आलोचनामा उत्रेका छन् । यसको विरोध कांग्रेस भित्रबाट समेत भईरहेको छ । यो कांग्रेसको तेस्रो गल्ती हो ।
कांग्रेसलाई कांग्रेसकै डर
२०६२ सालअघि हाल प्रदेश–२ का जिल्लाहरूमा नेपाली कांग्रेसको मुख्य जनाधार थियो । मधेसवादी दलहरूको उदयसँगै कांग्रेसको किल्ला भत्कियो । कांग्रेसका प्रभावशाली नेता महन्थ ठाकुर, जेपी गुप्ता, शरदसिंह भण्डारी लगायत नै कांग्रेस छोडेर मधेसवादी दलमा आबद्ध भए । यसकारण कांग्रेसले आफ्नो पुरानो ‘भोट ब्यांक’ गुमाउन पुग्यो ।
मधेसवादी दलहरूमा बढेको विकर्षणले के फेरि कांग्रेसप्रति आकर्षण बढेको हो त ? यसमा राजनीतिज्ञहरूका फरक–फरक धारणा छन । जसपा केन्द्रीय सदस्य शैलेश चौधरी प्रदेश–२ मा जसपाको विकल्पमा कांग्रेस भए पनि कांग्रेसभित्रकै आन्तरिक किचलो प्रमुख समस्या देख्छन । उनी भन्छन, “कांग्रेसप्रति मानिसहरूको आक्रोश छैन । कांग्रेसको आन्तरिक किचलो र गुटबन्दीले समस्या छ । तीन चार गुट छन । यसले कांग्रेसलाई घाटा र्पुयाउँछ ।”